याै,न स,म्पर्क ग,र्दागर्दै चारजनाकाे लिं,ग भा,चिएपछि…. – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १४, २०७८ समय: १३:४७:३०
काठमाण्डाै।संसारमा बाच्नुमात्रै पर्छ के के देख्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ अाफैलार्इ पत्ताे हुदैन । हाे यस्तै अचम्मलाग्दाे घ,टना भएकाे छ सुनसरीकाे धरानमा याैन सम्पर्क गर्दागर्दै चारजना पुरूषकाे लिं,ग भा,चिएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन ।
घ,टना एकसाता अघीकाे हाे । एक हप्ताकाे अवधीमा चार जनाकाे लिं,ग भाचिएपछि धरानस्थित बिजयपुर अस्पताल भर्ना भएका थिए । अस्पतालका सर्जरी बिभाग प्रमुख डाक्टर राेसन खतिवडाका अनुसार याै,न स,म्पर्ककाे बेला लिं,गकाे हड्डी भाचिएर अस्पताल भर्ना भएका चारैजनाकाे सफल सल्यकृिया भइसकेकाे र उनिहरू खतरामुक्त रहेकाे बताए ।
धरानमा याे घटना अहिले सम्मकै नाैलाे रहेकाे डाक्टर खतिवडाले बताए । लि,ङ्ग भाँ,च्चिएर श,ल्यक्रिया गरिएका पुरुषहरुकाे नाम सार्वजनीक गर्न नमिल्ने बताउदै अस्पतालका डा . खतिवडाले उनिहरू २२ वर्षदेखि ५७ वर्ष उमेर समूहका रहेको र तिनजना बिवाहित एकजना अविवाहित रहेकाे पनि बताए ।
हप्तादिनको अवधिमा लि,ङ्ग भाँ,च्चिएका पु,रुषहरु फरक फरक समयमा असप्ताल भर्ना भएपछि शल्यक्रिया गरिएको डाक्टर खतिवडाले बताए। लि,ङ्गको भित्री भागमा रहने मांशपेसी भाँ,च्चिएर रगत जमेका कारण चारैजनाको शल्यक्रिया गर्नुपरेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
यौ,नस,म्पर्क गर्दा लि,ङ्ग भाँच्चिने समस्या अत्यन्तै कम हुने भएपनि धरानमा एक हप्ताकाे अवधीमा देखिएकाे याे समस्या धरानकाे इतिहासमा सायद पहिलाे घटना रहेकाे डा.खतिवडाले दाबी गरे ।